Piloteer, arjiga usbuuca | Wararka IPhone
Piloteer, ama sida loo duulo diyaarad la'aan barnaamijka usbuuca
Pablo Aparicio | | Barnaamijyada IPhone, Iibka
Toddobo maalmood ayaa mar kale laga soo gudbay, sidaa darteed Apple waxay mar hore cusbooneysiisay kor u qaadista barnaamijka toddobaadlaha ah. Markan, barnaamijka toddobaadku waa ciyaar. Taas waan kuu sheegi karaa. Ku saabsan yahay Duuliye, Halka aan ku ciyaareyno doorka hal-abuuraha (Waxaan u maleynayaa inay iyadu tahay, maaddaama ay xirto kabo cidhib ah) oo naqshadeeyay jetpack, ama waxa la mid ah, kuwa wax gata oo dhabarka loo saaro inay duulaan. Maxaa ka jira Piloteer? Si daacad ah weli ma hubo.
Isla markii aan arkay inay jiraan codsi cusub oo usbuuca ah, waxaan go'aansaday inaan isku dayo inaan la wadaago dhammaantiin. Markii aan bilaabay inaan ciyaaro, waxaan dareemay xoogaa jahwareer, wax la mid ah wixii aan dareemay markii aan isku dayay Flappy Bird markii ugu horeysay. Waxa inala gudboon waa xakamee duulimaadka ee halyeeygeena geesinimada leh, iyada oo aan marka hore magaceeda la siinin. Waa inaan qirto taas inaan isticmaalo a nick Caadi ahaan waxaan u imid inaan waco halyeegeyga «Torpeteer», anigoo si maldahan u sheegaya sida uu ugu xunyahay duulimaadyadiisa.
Aragtida lagu xakameynayo hindisaha Piloteer waa mid aad u fudud. Haddii aan dhanka midig u riixno, astaantu gadaal / gadaal ayey u duuli doontaa. Haddii aan bidixda taabanno, horay iyo kor ayey u duuli doontaa. Dhibaatadu waxay timaaddaa markaan rabno inaan aragtida dhaqanno. Aniga ahaan waxay ii fududahay inaan madax-u-boodka ku tuuro mid ka mid ah balliyada halkii aan si habboon ugu duuli lahaa.
Heerka koowaad, kan jardiinada, waxaa jira meel aan ku aragno "S" jiif ah oo fallaadhuna ku taal dhinaceeda midig. Waxaan qiyaasayaa in waxa ay tahay inaan sameyno ay yihiin qaabka «S» si aan ugu gudbi karno heerka. Kuuma xaqiijin karo waayo ma aanan guuleysan, marka ma aanan arag wax aan ka aheyn Torpeteer oo shilal ku dhaca. Waqti kasta iyo ka dib xitaa waxay u muuqataa sida cinwaanka wararka oo leh 'dadku waxay ka walwalayaan shilalka Torpeteer. Jetpacks-ka ma nabad qabaan?»Kaas oo aan uga jawaabi lahaa maya, xitaa riyooyin, ugu yaraan kan dabeecaddayda.
Caqli ahaan, faraska hadiyadda ah maahan inaan eegno ilkihiisa. Way fiican tahay inaad soo dejiso ciyaarta iyadoo laga faa’iideysanayo dalabkan toddobaadle ah. Yaa og? Iyada oo ku-celcelintii loo baahnaa ay noqon karto ciyaar wanaagsan, in kastoo aan shaki ka qabo. Uguyaraan, adigoo ciyaaraya daqiiqado yar, waxaan kaheli doonaa dhibco nagu filan Xarunta Ciyaarta. Haddii aad isku dayday, maxaad u malayn Piloteer?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Iibka » Piloteer, ama sida loo duulo diyaarad la'aan barnaamijka usbuuca
Apple waxay bilawday qorshe lagu badalayo fiilooyinka cilladaysan. Hubi inay taada ku jirto liiska
IOS 9.3 beta 2 wuxuu kuu ogolaanayaa inaad cusbooneysiiso qalabka qalabka iPad Pro